Smart Mpandahateny: Ny mpividy ny Guide - News Fitsipika
Afaka manao ny zavatra rehetra amin'ny toerana tena milalao ny feon'ny ny fandefasana ny amin'ny jiro. Fa izay no tokony hahazo? Isika hitsapana ny mpitarika efatra modely
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Smart miteny: ny mpividy ny mpitari-dalana” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa ilay Mpandinika ny alahady 25 Febroary 2018 09.30 UTC
Price: £ 89,99Amazon faharoa-taranaka Echo dia revamped dikan-tenin'ny fitaovana izay namorona ny sokajy rehetra ny marani-tsaina miteny amin'ny 2014. Ny vaovao dia kelikely kokoa Echo, maneno tsara kokoa ary tsara kokoa mijery, ao anaty safidy ny lamba na hazo vita.
Inona no mahatonga ny Echo lehibe ny virtoaly Amazon mpanampy, Alexa. Ny peratra ny fito mikrô tao an-tampon'ny mihaino avy noho ny safidy fanairana teny - ny toerana misy anao fotsiny "Alexa" - talohan'ny nanirahany izay lazainao amin'ny Amazon ny lohamilina for heviny. Alexa afaka hihaino anao foana ao anatin'izany ny mozika toy ny feo mafy toy ny extractor mpankafy sy tsara tarehy lavitra.
Alexa manana multi-mpampiasa fanohanana, afaka mamaly tena be dia be ny fanontaniana, dia tsara amin'ny fandikana izay lazainao ary manana plethora ny naorina-in talenta sy ny fahaiza-antoko fahatelo-azo plugged ao anatiny, manao izany ny tena boribory misy feo mpanampy. Tsy mahay indrindra mihoatra noho ny fahalalana ao an-trano sy ny fanaraha-maso ny mozika playback, amin'ny feo feno fanaraha-maso ny Spotify, Amazon Music sy TuneIn.
Ny vaovao ihany koa ny feo Echo tsara noho ny taloha ny iray, bebe kokoa basse sy ny fahazavana, ambony indrindra amin'ny boky. Na dia tsy ny tsara indrindra ao amin'ny bunch, izany tokoa punches ambony ny lanjan'ny ny vidiny, afaka hameno ny efitrano sy ny mari-pahaizana 360-teny iray monja avy 2.5in woofer sy ny 0.6in Tweeter. Ary na dia manana feo avy Bluetooth seranan-tsambo sy ny mampitohy ny mpandahateny sy ny mozika mivantana na avy amin'ny Echo.
Ny Alexa Amazon App tena mahavita, raha kely kamo, fanaovana ny fametrahana azy sy ny zava-mora miova. Bokotra teo an-tampon'ny ho an'ny boky, ny asa, ary ny moana bokotra bokotra dia Hameno ny fahazavana peratra manodidina ny tampony izay mampiseho aminao izay manao Alexa sy izay mihevitra ny Echo miteny ianao avy. Moana ny mics sy ny peratra glows mena, izay mora ny mahita manerana ny efitrano.
Didim-pitsarana: Amin'ny £ 90, sarotra ny nikapoka ny Echo, amin'ny Alexa fanaovana ny tsara indrindra sarobidy-manodidina manan-tsaina rehetra mpandahateny.
The Apple HomePod: feo mahavariana kalitao. Sary: Antonio Olmos
Price: £ 319 Ny vaovao dia Apple fidirana sy ny HomePod, izany, ny iPhone-mpanao dia manatevin-daharana ny antoko farany mihoatra ny telo taona voalohany taorian'ny Echo namely ny tsena. Ny HomePod no lehibe indrindra sy lafo indrindra mahay nanao lahateny tao amin'ny vondrona, ny harato-rakotra varingarina amin'ny fisaka silicone ambany sy malamalama, mikasika-kapila mora eo an-tampony.
Na dia eo aza ny maha lehibe, fa ny tsotra indrindra ny bunch ary toy ny ao an-trano eo afovoan'ny latabatra an-dakozia tahaka ny amin'ny mantelpiece na fitoeram-boky. Aoka ianao ho fampitandremana, anefa: ny silicone tongotra dia handao peratra fotsy marika amin'ny hazo tsaboina. -Tampon'ny miafina boky roa bokotra sy ny afovoany multicolour maneho izay mampiseho rehefa Siri, Apple ny feon'i mpanampy, mihaino anao. Tsy mora ny mahita manerana ny efitrano, ary raha afaka moana ny mikrô, tsy misy hita maso ny HomePod voalaza fa tsy mihaino intsony.
Ny HomePod no arguably ny tsara indrindra-maneno nanao lahateny tao amin'ny bunch. Tsy manana nahay ny fito tweeters ary iray woofer izay mahatonga ny tena velabelarina be ianao soundscape mety hahita avy mpandahateny iray. Tsy tonga dia manitsy ny ny manodidina azy, famoronana immersive traikefa na aiza na aiza izany no napetraka tao amin'ny efitrano, amin'ny lalina fa mafy maso basse sy ny tsara fisarahana, izany hoe na inona na inona very, na dia ao amin'ny crescendo.
Na dia toa tsara, Siri Apple ny marina dia tsy niakatra ho any amin'ny fitsipika toy ny Google ihany mpanampy na Amazon ny Alexa. Tsy afaka mihaino anao ary koa ny tsara indrindra ao aminy, fa aoka ho fantatrareo aminareo aza dia raharaha hafa. Siri mahazo izay tena miezaka ny milaza manodidina 70% ny fotoana, izay mety ho tena hahakivy, raha mbola ny fahafahana hamaly fanontaniana ary manao asa marina dia tsy mba tahaka tsara. Tsy misy mpampiasa multi-kaonty fanohanana, na, izay midika fa tsy mora ny miaraka amin'ny fianakaviana an-trano.
Ny HomePod manohana ihany koa ny Apple iTunes Music na Match, izany hoe tsy teratany Spotify na onjam-peo any an-dafin'ny mitempo 1. Music azo nalefa tany izany amin'ny alalan'ny AirPlay avy amin'ny iOS fitaovana, Mac na iTunes amin'ny PC, fa fitaovana Android ireo ka tsy misy Bluetooth na MANAN-TANTARA-ho fanohanana. IOS fitaovana maoderina Ilaina koa ny hampitoetra ny HomePod, izay midika fa ho an'ny rehetra-Apple mpampiasa ihany.
Didim-pitsarana: Tsy toa be fa Siri, fifandraisana sy ny asa fanompoana mozika dia fomba fanohanana ao ambadiky ny fifaninanana.
Google Home: 'Assistant Ho afaka miasa avy izay tena miezaka ny manontany, tsy misy hafa. ' Sary: Antonio Olmos
Price: £ 129 Google Home mpandahateny mahay dia kelikely kokoa, chubbier fitaovana noho ny ankamaroan'ny olon-kafa. Raha tokony ho ny varingarina tahaka ny Echo na ny HomePod, ny Home mijery toy ny vazy amin'ny fotsy, malefaka-mikasika, plastika fotsy ambony sy ny lamba base (manafina iray mandaha-teny sy atao roa radiators).
Manontolo ny ambony dia mikasika tontonana-saro-pady. Tsindrio ny foibe hampavitrika Google Assistant sy swipe ny fanondrony amin'ny boribory pahazarana mba zatra ny boky. Ny bokotra ao ambadika mutes ny mikrô. Niafina tao ambanin'ny ny tampony dia peratra ny LED, izay hazavana izy mba haneho anao ny zava-mitranga, rehefa manao lamina circling Assistant dia namaly na Nandrehitra ny mavo rehefa mics dia muted.
Google Home roa mics an-tampon'ny izay mahatonga Mpanampy hihaino anao tsara tarehy, ny tena tabataba sy mozika, nefa tsy tena ary koa ny Echo. Assistant manana ny fahaiza-manao toy izany koa napetraka mba Amazon ny Alexa sy ny tsara indrindra voajanahary misy teny fankasitrahana - raha mikorontana ambony ny fanontaniana, Assistant dia tokony ho afaka miasa avy izay tena miezaka ny manontany, izay tsy hafa. Izany koa multi-mpampiasa fanohanana, manaiky feo samy hafa sy ny fanaovana azy io mora ny mahazo mozika avy amin'ny fitehirizam-boky na ny vaovao avy amin'ny kalandrie.
Mpanampy manana vaovao lehibe indrindra banky angona, manao izany tsara kokoa noho ny hafa amin'ny fahalalana ankapobeny, nianjera indray ilay tranonkala Raha mila fanazavana fanampiny, fa ny fahatelo-antoko fampiharana sy ny fanaraha-maso an-trano mahay haingana toy somary aoriana Alexa.
Ny feo avy any Home dia fa mivantana kokoa noho ny Echo, nitifitra ny aloha. Izany dia somary be dia be, ary mety hahazo basse mafy tsara tarehy ho an'ny kely mpandahateny, fa tsy mazava noho ny Echo. Tsy misy Bluetooth avy na analogue faladiany, saingy afaka milalao mozika natively avy Spotify na Google Play Music na mandray mozika alalan'ny Bluetooth na Google Cast.
Didim-pitsarana: Google Assistant ny fahalalana sy ny vaovao ny fidirana dia manam-paharoa, fa Home kokoa lafo noho ny Echo.
The Sonos One: Alexa tao an-tsambo, ary saika isan-service misy mozika. Sary: Antonio Olmos
Price: £ 199 Ny iray Sonos Nampanantena ny ho Jack rehetra po. Sonos naka ny lehibe Play:1 fitoeram-boky mpandahateny, nanampy ny mikasika-saropady amin'ny bokotra ambony noho ny hamafin'ny feonao sy ny playback sy perforated azy amin'ny lavaka ho enin-Mika nahay in-tampon'ny. Toy izany, ny iray dia bebe kokoa ao an-trano eo amin'ny fitoeram-boky, na mitovy kokoa noho eo afovoan'ilay latabatra, toy ny tokan-tena sy ny Tweeter woofer forwards face fa tsy projecting feo amin'ny toro-lalana rehetra.
Tsy toy akory va ny fitenenana hafa ao amin'io vondrona, Ilay manana ny hery anaty mba hanohanana feo mihoatra ny iray mpanampy. Izao dia izao, Tafiditra amin'ny Amazon i Alexa, fa ny orinasa dia miasa amin'ny Google Assistant fampidirana koa.
Mety hihaino tsara anao sy roa LED in-tampon'ny. Ny iray mampiseho ny mics na dia eo ary ny iray kosa tselatra, rehefa Alexa dia miasa. Tsy toy ny sisa, Ilay ihany koa ny mahatonga ny bip rehefa mandre ny fanairana Alexa teny, Koa dia mora kokoa ny hilaza manerana ny efitrano fa ny mihaino. Ny iray manohana ny ankamaroan'ny Alexa miasa, anisan'izany ny fahaiza-manao, fanaraha-maso sy ny manan-tsaina an-trano lefitra endri-javatra, miampy feo feno mifehy ny Spotify, Amazon Music sy TuneIn, fa tsy ampy fiantsoana sy ny feon'ny eBook playback.
Koa tsy toy ny sisa, ny iray dia afaka miasa tanteraka ho toy ny tsy misy Wifi mpandahateny Alexa. Ny fampiharana Sonos saika mampiditra hira rehetra fanompoana atỳ ambanin'ny masoandro, anisan'izany ny Apple Music, ho iray karohina toerana, na azonao ampiasaina Spotify Connect mba hilalao mozika. Tsy misy Bluetooth na analogue-peo fanohanana, anefa. Azonao atao ihany koa ny feo tweak ny eritreritsika eo amin'ny fampiharana ary hanao izay Sonos miantso Trueplay Tuning mampiasa ny iOS fitaovana mila manatsara ny feo ho an'ny efitrano.
Ilay toa lehibe toy ny tsirairay mpandahateny, fa na dia toa tsara kokoa ao amin'ny Stereo mpivady, ary azo ifandraisany amin'ny misy ny zokiolona Sonos fitenenana ho multi-efitra teny.
Didim-pitsarana: Tsara-maneno io mpandahateny amin'ny Alexa dia sarotra ny nikapoka combo.
23307	10 Alexa, Google home, portable, manan-tsaina mpandahateny, mahay miteny
← Apple HomePod Farany Available ny Buy Samsung Galaxy S9 + Review →